Etihad Cargo na Royal Air Maroc ibu na-abawanye nkwado
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Etihad Cargo na Royal Air Maroc ibu na-abawanye nkwado
Airlines • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Transportation
Etihad Cargo na Royal Air Maroc Cargo abanyela na Memorandum of Understanding (MOU) nke ga-ahụ ụgbọ elu abụọ ahụ na-arụkọ ọrụ n'ọtụtụ ebe gụnyere mmepe ntanetị, ntinye ụgbọ mmiri na ịba ụba okporo ụzọ n'ọtụtụ ụzọ ahia n'ime ọnwa itoolu na-esote.
MOU a bịanyere aka na isi ụlọ ọrụ Royal Air Maroc na Casablanca site n'aka David Kerr, Onye isi oche ndị isi, Etihad Cargo na Amine El Farissi, onye isi oche Cargo, Royal Air Maroc. Abdelhamid Addou, onye isi ndị isi ọrụ ụgbọ elu mba Moroccan bịakwara nbinye aka na ya.
Maazị Kerr kwuru, sị: “MOU ọhụrụ a na - eme ka Etihad Cargo tinye aka na ndị ahịa anyị site n’inye ikike na ohere ka ukwuu ebe aga gburugburu ụwa. Mụ na Royal Air Maroc, anyị na-arụ ọrụ maka afọ gara aga iji nyefee ọrụ ka mma maka ndị na-ebu ụgbọ mmiri na US, Canada, Brazil na West Africa.
"MOU a bụ ihe akaebe maka ihe ịga nke ọma nke mmekọrịta anyị - ma nke azụmahịa maka ụgbọ elu anyị dị iche iche, yana maka ndị ahịa anyị ndị riterela uru site na njikọta enwekwuru."
Maazị El Farissi kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ iwusi mmekọrịta anyị na Etihad Cargo ike site na nkwekọrịta a. Mbinye aka nke MOU a bụ ihe dị mkpa maka mmekọrịta anyị na-adịte aka.
“Ekele maka mmekorita ala na nke azụmahịa nke ga-esi na mmekorita a na-agbanwe egwuregwu a, anyi ga-eme ihe omuma anyi rue ozo, tumadi n’ahia ahia nke Africa na America. Royal Air Maroc Cargo ga-eritekwa uru site na arụmọrụ Etihad Cargo na etu esi arụ ya. ”
Linesgbọ elu ụgbọ elu ga-anọ ọnwa itoolu na-esote ịzụlite okporo ụzọ site na mmepe njikọta njikọta, gụnyere ntinye nke ndị na-ebu ibu, na ịchọpụta mpaghara ndị ọzọ nke imekọ ihe ọnụ.
Royal Air Maroc Cargo na-arụ ọrụ otu ụgbọ Boeing 737, nke ọdụ ụgbọ mmiri 10 Etihad Cargo ga-agbakwunye - Boeing 777Fs na Airbus A330Fs ise - yana ikike ijide afọ na ụgbọ mmiri agwakọtara karịa ndị njem ụgbọ elu 150 si abụọ ụgbọ elu.